Paulo Dybala Ayaa Shaaca Ka Qaaday Nolosha Dhabta Ah Ee Nolosha Murugada Leh Ee Xanuunka Coronavirus? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Paulo Dybala ayaa shaaca ka qaaday sida dhabta ah ee nolosha murugada leh ee cudurka coronavirus wuxuuna ku adkeystay in guriga la joogo ay tahay sida ugu wanaagsan ee looga takhalusi karo masiibada.
Weeraryahanka kooxda Juventus ayaa ka mid ahaa ciyaartoydii ugu caansan ee kubada cagta ee xaqiijiya in uu tijaabo fiican u sameeyay COVID-19, in kasta oo Dybala uu rajo weyn ka qabo in uu cudurka ka ruxay.
Isaga iyo gabadha ay saaxiibka yihiin Oriana Sabatini waxay ku sugnaayeen go’doon, Dybala wuxuu sheegay in labadoodaba dib loo baari doono si loo hubiyo haddii ay hadda cadahay.
26-jirkan ayaa sheegay inuu doorbidi lahaa khubaradu inay talo ka bixiyaan sidii wax looga qaban lahaa fayraska laakiin wuxuu intaas ku daray: “Waxaan had iyo jeer isku dayaa inaan farriin ka siiyo wixii igu dhacay, in dadku si dhab ah u qaataan oo ay gurigeyga joogaan.” Dybala ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday sida dhakhaatiirta Juventus ay maalin walba xiriir ula leeyihiin.
“Dadka halkan jooga oo dhan aad bay noogu fiicnaayeen kiisas badanna halkan bay joogsadeen. Had iyo jeer waxaan u sheegaa inaan fiicanahay oo aan isku dayo inaan arko dadka sida dhabta ah u baahan,” ayuu yidhi.
Talyaanigu waxaa si xun ugu dhacay dhibaatada caafimaad ee adduunka, Dybala wuxuu aad uga warqaba inay jiraan dad badan oo waayo aragnimo xumo u leh coronavirus marka loo eego isaga iyo saaxiibtiisa.
“Hagaag, nasiib wanaag anagaa aad ayaan u fiicanahay, maalmahan ma hayno wax astaamo ah” ayuu yidhi.
Waxaan lahaa astaamo adag, si dhaqso ah ayaan u daalay, markii aan doonayay inaan tababar qaato, neef ayaan ka yaraaday shan daqiiqo ka dib. Halkaas waxaan ku ogaanay inaysan wax sax aheyn oo baaritaannada naadiga ah naloo sheegay in aan fiicanahay.
“Halkaasi waxaan ku laheyn astaamo badan, sida qufac, jir daal ah iyo markii aan seexanay waxaan dareemay qabow aad u daran, laakiin kooxda waxay noo sheegeen inaan fiicanaaneyno sidaas darteed waa inaan is dejino.”
Dybala wuxuu yidhi welwelka ugu horreeya ee aad qabtid ee ku dhaca coronavirus ayaa si gaar ah u adag “Waa waxoogaa nafsiyan ah, sababtoo ah waxaad dareemeysaa wax oo aad waligaa baqaysaa” ayuu yidhi Waxaan isku dayay inaan ku fikiro inaysan taasi noqon karin.
Labada lamaane ayaa isku dayaya inay ka dhigaan kuwa reer Argentina inay ogaadaan marxaladaha adag ee ay wajahayaan Dybala wuxuu sidoo kale ku duray nuxur yar waraysigiisa kaasi oo uu siiyay ururka xiriirka kubada cagta Argentina ee AFA Play.
“Oriana iyo waxaan u baahan nahay inaan markale tijaabino si aan u ogaano inuu dhumey iyo in kale. Anaguna waan ogaan doonnaa runta,” ayuu yidhi “Had iyo jeer waan kaftamayaa anigoo ka fikiraya inay aniga aniga tahay kan u gudbiyay fayraska maadaama qaar ka mid ah asxaabteyda kooxda Juventus ay haysteen Waan hubaa inay aniga ahayd.”
“Messi Wuxuu Xaq u Leeyahay Inuu Ka Xanaaqo Eric Abidal Hogaamiye Ahaan Wuxuu Kaliya Isku Dayey Inuu Difaaco Ciyaartoydiisa Iyo Naftiisa”.